किन भासिन्छ पोखरा ? – POKHARA TOURISM NEWS
HomePokharaकिन भासिन्छ पोखरा ?
किन भासिन्छ पोखरा ?
August 23, 2021 Rohit Basnet Pokhara 0
भाद्र ७ पोखरा : पोखराको महेन्द्रपुल स्थित गरिमा विकास बैंक अगाडी ठुलो बर्साद र भेलपानी सँगै एकाएक जमिन भासियो । पोखरामा बर्सेनि जमिन भाँसिरहन्छ तर सानो तिनो भ्वाङ पर्ने हुनाले खास चर्चाको विषय हुँदैनथ्यो । केही बर्ष अघि अर्मलामा भने निकै भासियो । एकै स्थानमा धेरैवटा भ्वाङ परेपछि स्थानिय त्रसिए ।
पोखरा नगर क्षेत्र र आसपासका अधिकांश स्थानका जमिन कमजोर रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । विशेषगरी पोखराका नदीपुर, नयाँबजार, न्युरोड क्षेत्र, लेकसाइड, छोरेपाटन, चाउथे, विन्ध्यावासिनी, हेम्जा, अर्मला, फुलबारीलगायत क्षेत्र कमजोर रहेको बताइएको छ । ती स्थानमा बेला–बेला जमिन भासिने गरेका छन् ।
पोखराको जमिनमुनि कमेरो माटो छ । बर्षामा कमेरो माटो बगेर जाने गर्छ । बर्साद र भेलपानी ले निकास नपाउनु तथा घरको छतको पानीको उचित व्यवस्थापन नहुनु पनि जमिन भासिनुको मुख्य कारण भएको विज्ञ बताउँछन् । भू–बनावटको ख्यालै नगरी निर्माण गरिएका भौतिक संरचनाका कारण जमिन भासिएको उनीहरुको भनाइ छ । पोखराको जमिन अति संवेदनशील छ भन्ने थाह हुदा हुदै संरचना निर्माण मा संबन्धित सरकारी निकायहरुको अनुगमन र वातावरण प्रति को चासो अझै न्युन नै छ भन्ने बुझिन्छ । महानगरमा एक से एक अनुभवी जाने बुझेका ईन्जिनियर हुँदा यस्तो हालत हुनु दुखद खबर हो । विशेषगरी वर्षा लागेपछि जमिन भासिने गरेको छ ।